Mmepụta imepụta Constanta - Onye mmepụta ụkpụrụ ụlọ Constanta - Nobili Imepụta ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, imepụta, ahịa
Imepụta Imepụta Constanta
Ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Constanta
n'ime ime imewe mgbe nile	imepụta ime ụlọ mgbe niile	ike ụlọ ime ụlọ	ụlọ ahịa na-akwụ ụgwọ mgbe nile	onye na-ebipụta ụlọ ime ụlọ	ime imewe mangalia constanta	imepụta ime ụlọ na-edozi	arụ ọrụ ime ụlọ mgbe nile	ime ụlọ ime ụlọ mgbe niile	ụlọ ọrụ mgbe nile	onye na-ewu ụlọ mgbe niile	imewe ime imewe mgbe niile ahịa	ime ụlọ ime ụlọ mgbe nile	Imeghari ime ụlọ	ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mgbe niile	ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mgbe niile	onye mmebe nke ụlọ ọrụ na-adịgide adịgide
Ọ bụla n'ime ime imewe oru ngo maka ụlọ, Villas, ụlọ na Constanta agụnye ihe ọmụma, ịnụ ọkụ n'obi na a ọtụtụ mkpebi siri ike, nke bụ ya mere na otu nke architects na ime ndị na-emepụta si Noble Interior Design bụ ike ezigbo maka oru ngo nke residential na azụmahịa na Constanta. Ma ọ bụ ihe ime imewe na kpochapụwo style okomoko a n'oge a ma ọ bụ eclectic maka a classic ụlọ n'uko, n'oge a na Amọraịt + na n'ala ma ọ bụ ulo 4 ụlọ zuru ezu dị otú ahụ a oru ngo na-agụnye ma ndidi na itinye ego si ahịa . Ọtụtụ ugboro na mmefu ego na-arụ ọrụ dị mkpa, ma na ahịa bụ na-emeghe ka amụma na-atụ aro ka mkpa karịa ihe ọ bụla n'oge na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị. Anyị na-agba ị na-ele akụkụ nke Pọtụfoliyo nke ọrụ mere ka anyị na ụlọ ọrụ maka omenala ụlọ, n'oge a na ụlọ na Constanta.
Ụlọ ime ụlọ Constanta
Ime ụlọ nke ụlọ ndị dị na Constanta
Ụlọ ụlọ ime ụlọ na Constanta
Onye na-emepụta ihe bụ Constanta
Ime ihe eji eme ihe n'oge a na ụlọ dị na Constanta
Ime ụlọ imepụta ụlọ ụlọ Constanta
Ịmepụta echiche ime ihe kwekọrọ n'udo n'enweghị enyemaka nke a ime ụlọ mmepụta ihe bụ ọrụ na-agaghị ekwe omume. Emeghi atụmatụ ime n'ime imepụta atụmatụ imepụta ime ụlọ maka ụlọ, obodo ma ọ bụ ụlọ dị na Constanta nke ga-egboju mkpa na ọchịchọ gị nile. Anyị na-eche banyere imewe ebe nnabata unit style ngwá ọrụ nke ụlọ, na onye ụlọ atụmatụ. Ụlọ ọrụ ime ụlọ anyị nke dabeere na Constanta na-edozi nsogbu dị mgbagwoju anya. Mgbe a na ogbo i nwere ike ijide n'aka na ị maara nke otú ị na-egosi n'ụlọ gị gị na ime imewe echiche site n'ikwu 3d ekenịmde anyị na-emepụta. Ka ịmepụta ime imewe oru ngo maka oge a na ụlọ n'ala ma ọ bụ n'uko classic Amọraịt + na Constanta, dị iche iche na-eru nso na-mkpa, n'adịghị ụlọ ma ọ bụ azụmahịa oghere dị ka ụlọ ọrụ, ma ọ bụ hotel resaturant. Onye mmebe ga-ewere ọrụ nke ohere ahụ ma nye ya ntanetịaka, dị ka mmiri, kpo oku, ọkụ eletrik na ngwá ụlọ. Olee ihe ndị anyị bụ na ime imewe oru ngo nwere ike etinye site n'ime ime imewe ụlọ ọrụ na-mejuputa oru ngo na Constanta mere maka ụlọ gị. Ma ndị kasị mkpa dị iche bụ na mmebe na-arụ ọrụ ọ bụghị nanị na ime ma n'èzí ulo. Emeghị atụmatụ ime atụmatụ imepụta ime ime na Constanta enwetawo ọkwa dị elu dabere na ọtụtụ nyocha dị mma sitere na ndị ahịa anyị. Ọnụahịa maka ọrụ mmepụta nke ime ụlọ maka ụlọ ma ọ bụ obodo nta na Constanta na-apụ na 17 euro kwa mita mita. Ị ga-ahụ na anyị Pọtụfoliyo ime imewe oru na oge gboo style, oge a na aghụghọ niile isi ebe nke obodo ndị dị ka Constanta asị Mangalia, Eforie, Navodari, Cernavoda, Medgidia, Mamaia, Costinesti.
Imepụta Imepụta Constanta - Onye Mmebe Constanta - Nobili Interior Design
Ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Constanta Emeghị atụmatụ ime obodo
Ọ bụrụ na ị kpebiri iji ọrụ nke ụlọ ọrụ ime ụlọ, ime ụlọ, ime ime ime, Emeghị atụmatụ ime obodo awade ime imewe ọrụ 3d, tinye turnkey omenala ụlọ, Amọraịt, ulo, hotel boutique, ụlọ mbikọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ọrụ, ezumike ihe agbamakwụkwọ, mmanya, Ofel, ụlọ ahịa uwe akpụkpọ ụkwụ, showroom, ịzụ ahịa, ọla, okooko osisi , omezi isi, mma ụlọ, ịma mma ụlọ Mmanya, ọgwụ ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ ọta akara na Constanta, Ovidiu, Mangalia, Navodari, Cernavoda, Medgidia Murfatlar, Harsova, Eforie, Techirghiol, Baneasa na Negru Voda, Cap Aurora, Costinesti Eforie North Eforie Sud, Gura Portiţei, Jupiter, Mamaia, Mangalia, Neptun, Olimp, Saturn, Vama Veche, Venus, North Mamaia, Constanta asị, 23 August Adamclisi Agigea Albesti Aliman, Amzacea, Bărăganu, Castelu, Cerchezu, Chirnogeni Ciobanu, Skylark, Cobadin, Cogealac Comana, Corbu Cross, tụgharịrị uche, Cuza Voda Deleni Dobromir Dumbrăveni Fantanele Gârliciu, Ghindăreşti, Garden, Horia, nnwere onwe, ion Corvin, Istria, Limanu Lipnita Ìhè, Mereni, Michael na Nwere Obi Ike, Mak, Mircea Voda Balcescu Oltina, Ostrov, Pantelimon, Pecineaga Cave Gate White Rasova Săcele, Saligny Saraiu, Seimeni Siliştea, Târguşor Topalu Topraisar, Tortoman, Tuzla, Valu Trajan, Vulturu. Anyị kwagara ebe maka oru ngo mbido mkparịta ụka dumnevoastra maka ime imewe. Anyị na-enye consultancy na ime imewe na nkwado maka mmejuputa iwu oru ngo nke ime imewe mepụtara anyị ụlọ ọrụ. Ị ga-ahụ folda anyị arụ ọrụ ime ụlọ mere maka ụlọ classic n'uko Villas na n'ala ụlọ na 3 ma ọ bụ 4 ụlọ Mediterranean-style Ogwe na ụlọ oriri na ọṅụṅụ a kpochapụwo ịke, mma ụlọ ahịa okomoko, landscaping n'ogige na ubi, ime na mputa residential ụlọ dechara sucess ụlọ ọrụ na Constanta, kamakwa n'obodo ndị ọzọ dị na Romania. Ahịa maka a oru ngo nke ime imewe dịgasị dabere ebe na mgbagwoju anya nke na-arụ ọrụ n'etiti 17 - 35 euro kwa square mita. Ime imewe oru na Constanta na-mere site n'ime ime mmebe-atụpụta ụkpụrụ ụlọ Gabriela Nechifor. Dị ka ihe na mbubata anyị ike na-enye ihe kasị mma ahịa maka dum nso nke ihe dị mkpa na-ebute usoro mmelite mma ma n'ime ime mma: seramiiki tile saa, parquet osisi classic ngwá ụlọ oge a ndụ ụlọ, kichin, ime, ime ụlọ ịwụ, ọkụ , Smeg ngwa, Franke, ji achọ cornices profaịlụ, ịdị ọcha ike maka ime ụlọ ịwụ.